गोरखा जिल्लामा निःशुल्क पशु बिमा कार्यक्रम सुरु « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
गोरखा जिल्लामा निःशुल्क पशु बिमा कार्यक्रम सुरु
२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १ : २८ बेलुका
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत गोरखा जिल्लामा निःशुल्क पशु बिमा कार्यक्रम शुरु भएको छ । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत जिल्लाभित्रका पशुपालक किसानका लागि निःशुल्क पशु बिमा कार्यक्रम शुरु गरिएको केन्द्रका प्रमुख डा. इन्द्रबहादुर भट्टले जानकारी दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रु ४२ लाख बजेटमार्फत कार्यक्रम शुरु भएको उनले बताए । “यसअघि जिल्लाभित्रका पशुपालक कृषकहरुले पशुपन्छी बिमाबापतको रकमको २५ प्रतिशत रकम आफैँले व्यहोर्नु पथ्र्यो”, प्रमुख डा भट्टले भने, “अब यो कार्यक्रम लागू भएसँगै कृषकहरुले किसानहरुले पशुवस्तुको बिमा गरेबापत कत्ति पनि रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ ।” निःशुल्क पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत एकजना किसानले अधिकतम रु एक करोडसम्मको बिमा गराएबापत लाग्ने खर्च कार्यालयले तिरिदिने उनले बताए । बिमा रकम भुक्तानीका लागि किसानले आफ्ना पशुवस्तुको बिमा गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रमखु डा भट्टले जानकारी दिए ।
“किसानले बिमा कम्पनीमार्फत पशुवस्तुको बिमा गर्छन्, बिमा गरिसकेपछि किसानले बिमाबापत भुक्तानी गरेको नगदी रसिद, बैंक खातासहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ”, उनले भने, “त्यसबाहेक कृषि फार्म भए फार्मको दर्ता प्रमाणपत्र र व्यक्ति भए नागरिकता उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया पुर्याएर रकम भुक्तानी गरिदिन्छौँ ।” कार्यक्रम शुरु भएलगत्तै १२ जना कृषकहरुले आफ्ना पशुवस्तुको निःशुल्क बिमा गराइसकेको उहाँले जानकारी दिए । त्यसबापत किसानलाई रु एक लाख ८२ हजार २७९ भुक्तानी भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म गोरखा नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका र पालुङटार नगरपालिकाका किसानले आफ्ना पशुवस्तुको निःशुल्क बिमा गराइसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म निःशुल्क बिमा गर्नेहरुमा कुखुरापालक किसानहरु बढी रहेको प्रमुख डा. भट्टले बताए । निःशुल्क पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट रु ४२ लाख बजेट प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । “अहिलेसम्म कति जना किसानका पशुपन्छी निःशुल्क बिमा गरिदिने भन्ने छैन”, प्रमुख डा. भट्टले भने । उनले अहिलेसम्ममा किसानले करिब रु आठ लाखबराबरको निशुल्क बिमा गराइसकेको जानकारी दिए ।